auteur 2 octobra 2017 Commentaires fermés
Mihamafy hatrany ny ezaka fanadiovana ny tanàna eto anivon’ny fari-piadidiana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra indrindra fa ny fanadiovana ny isam-pokontany. Raha araka ny nambaran’ny Lefitra voalohany eo anivon’ny Boriboritany Faharoa dia : « efa fanaon’ny Kaominina ny fanadiovana faobe toy izao, fa mihamafy fotsiny izy amin’izao noho ny fisian’ny valan’aretina ». Ny Sabotsy 30 Septambra 2017 dia ny Fokontany Antohomadinika Centre no nifandrombonan’ireo solotenan’ny Fokontany 44 (Boriboritany Voalohany), ny ekipan’ny Boriboritany Voalohany, ny DAS (Direction de l’Action Social) sy ny DSH (Direction de la Santé et de l’Hygiène). Ankoatra ny fanadiovana ny lalana sy ny elakelan-trano ary ny fisokirana ny lakan-drano dia nisy ihany koa ny fandrarahana ranom-panafody izay mamono ny bibikely sy ny otrik’aretina, teo ihany koa ny fanentanana maro isan-karazany mahakasika ny fahadiovana sy ny fahasalamana izay nataon’ny ekipan’ny DAS sy ny DSH (BMH Isotry)
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Boriboritany hatrany dia ny famporisihana ny olona halala madio sy hitia mihaina ao anaty fahadiovana no tena anisany tanjona amin’izao hetsika izao mba hisorohana ny aretina vokatry ny loto. Raha araka ny hita teny an-toerana mantsy dia mbola tena mihaina ao anatin’ny loto ny mponina eny ka izay indrindra no nanaovana izao hetsika goavana izao mba hanampiana ny mponina amin’ny fanadiovana ny manodidina azy rehetra .Tena mazoto manadio tokoa ny olona saingy mbola misy ihany anefa ireo izay tsy mbola taitra amin’izany fanadiovana izany.
Fanombohana sy fanentanana ihany izao hoy hatrany ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny Boriboritany fa ny tsirairay dia samy manana andraikitra amin’ny fanadiovana ny tanànan’Antananarivo. Ny hetsika dia mbola hitohy manerana ireo fokontany 44 eto anivon’ny Boriboritany Voalohany.